Wararka Maanta: Talaado, May 15, 2018-Shirka Baydhabo ee madaxda dowlad gobolleedyada oo galay maalintii labaad
Talaado, May. 15, 2018 (HOL) --Waxaa magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay ka soconaya maalintii labaad shir ay halkaa ku leeyihiin madaxda dowlad gobolleedyada dalka Soomaaliya.
Waxaa shirka jooga oo ka qeybgalaya madaxweynayaasha Puntland C/wali Maxamed Cali Gaas, madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe), madaxeynaha Galmudug Axmed Ducaalle Geelle (Xaaf), madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare, madaxweyne Shariif Xassan oo marti loo yahay iyo xubno kale.
Kulanka ayaa maalintii shalay lagu lafa-guray arrimo badan oo khuseeya xaalada siyaasadeed ee dalka, waxaana dhammaan madaxda maamul goboleedyada isku raaceen khubadahoodii shalay in dowladda federaalka Soomaaliya ay diidan tahay nidaamka Federaalka.
Hasse ahaatee marka dhinaca kale la eego qodobada ugu waaweyn ee shirkan lagu falanqeynayo ayaa waxaa ka mid ah Amniga iyo sidii ururka Al-shabaab looga xoreyn lahaa deegaannada ay heystaan, qeybsiga kheyraadka dalka iyo sidii wax iyaga ay isku waafaqsan yihiin ay ula hortagi lahaayeen dowladda federaalka.
Waxaa maalmihii ugu danbeeyay sii xumaanayay xiriir qaar ka mid ah maamul goboleedyada dalka iyo dowladda dhexe kadib markii ay isku khilaafeen go’aanka dowladda dhexe ay ka qaadatay khilaafka qaar ka mid ah dalalka carabta.